तपाइँको घर मा स्वागत गर्न को लागी मूल doormats | बेजिया
तपाईंको घरमा मूल ढोकाका स्वागतहरू
सुसाना Godoy | 09/09/2021 14:00 | घरका सामानहरू
सजावट को हरेक विवरण गणना। तेसैले, जब हाम्रो घर को सजावट हामी सधैं यो एक विशेष र व्यक्तिगत स्पर्श दिन को लागी प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाइँ ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जो मौलिकता को लागी अप्ट गर्न रुचाउनुहुन्छ, तपाइँ यी संग भाग्य मा हुनुहुन्छ मूल doormats। यो सधैं भनिएको छ कि आवरण पत्र भित्री को बारे मा धेरै भन्छन् र यस मामला मा यो कम हुनेछैन।
किनकि यी doormatts को लागी धन्यवाद, खुशी हामी लिने पहिलो कदम को हिस्सा हुनेछ। तपाइँ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ मूल वाक्यांशहरु, फिल्म प्रतिकृतिहरु वा धेरै अन्य विवरणहरु कि जमीन बाट प्रतिबिम्बित गरिनेछ। तपाइँ भवन मा रमाईलो छिमेकीहरु मध्ये एक हुनुहुनेछ। के तपाइँ त्यस्तो सोच्नुहुन्न?
1 आगन्तुकहरु जो doormats ल्याउन को लागी सबै भन्दा राम्रो सन्देश
2 एक मूल तरीका मा स्वागत गर्न को लागी Doormats
3 अनुकूलन doormat
4 तपाइँको मनपर्ने श्रृंखला
आगन्तुकहरु जो doormats ल्याउन को लागी सबै भन्दा राम्रो सन्देश
सधैं, वा लगभग, एक घर भ्रमण स्वागत छ। तर निस्सन्देह, यद्यपि हामी अभद्र देखाउन चाहँदैनौं, हामी चीजहरु को बारे मा मौन रहन्छौं कि हामी सोच्छौं। तेसैले, यदि तपाइँलाई थाहा छैन कसरी भन्न को लागी कि उनीहरु खाली हात आउँदैनन्, सट्टेबाजी जस्तै केहि छैन केहि सीधा वाक्यांशहरु छन् कि केही doormat जस्तै: 'शीर्ष आगन्तुकहरु बियर र कम फोहोर उठाउँछन्।' सायद प्रवेश को समयमा उनीहरु लाई दिईन्छ वा कम से कम, केहि मुस्कान रूपरेखा हुनेछ र यदि तपाइँ यो मनपराउनुहुन्छ, तपाइँ यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ यहाँ उही
अन्य doormat रक्सी को संकेत, वा खराब मूड बाहिर छोड्नजे होस् यो भौतिक छैन, यो केहि छ कि हामी सराहना गर्दछौं। केहि अरु को घर को नियम छ, ताकि कोहि पनी प्रवेश गर्न को लागी आश्चर्यचकित छैन। यस प्रकार, तपाइँ पहिले नै थाहा पाउनुहुनेछ कि तपाइँ के विरुद्ध हुनुहुन्छ। जस्तै एक मोडेल यो यो पनी बाट पारित सबै जो आश्चर्य गर्न निश्चित छ। त्यसोभए यो मौलिकताको पर्यायवाची हो, जसरी हामी यो मनपराउँछौं।
एक मूल तरीका मा स्वागत गर्न को लागी Doormats
शब्द 'स्वागत' पनि धेरै यी सामानहरु को विशाल बहुमत मा उपस्थित छ। तर यो साँचो हो कि ती जो हामी अमेजन मा भेट्टाउँछौं यो एक अधिक अजीब तरीका मा बोक्छ। किनभने केवल शब्दहरु संग यो केहि अपूर्ण हुन सक्छ, तेसैले, हामी गर्न मा शर्त 'स्टार वार्स' जस्ता फिल्महरु लाई संकेत र उनीहरुलाई अँध्यारो पक्षमा पास गर्नुहोस् यो आवश्यक ढोका।
यद्यपि यदि तपाइँ संगीत मनपराउनुहुन्छ, तपाइँ एक को बिर्सन सक्षम हुनुहुने छैन स्पेनी रक गीतहरु जस्तै एक Miguel Ríos समय मा गाए। ठिकै छ, अब तपाइँ यसलाई तपाइँको खुट्टा मा राख्न सक्नुहुन्छ र एक राम्रो जस्तै एक विचार संग कहिल्यै भनिएको छैन यहाँ हामी तिमीलाई देखाउँछौं। त्यहाँ सधैं तपाइँको मनपर्ने को लागी एक विचार हुनेछ!
पक्कै तपाइँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ एक व्यक्तिगत तरीका मा तपाइँको आफ्नै doormat, ताकि परिवार को सबै एक तरीका वा कुनै अन्य मा प्रतिनिधित्व गरीन्छ। तेसैले, सबै भन्दा राम्रो तपाइँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको नाम डिजाइन मा जूताहरु को प्रत्येक अन्तर्गत राख्ने शर्त मा छ। यहाँ। यदि तपाइँ बच्चाहरु छैन, तपाइँ घरपालुवा जनावर हुन सक्छ र उनीहरु पनि तपाइँको doormat मा उपस्थित हुन सक्छन्, उस्तै तरीकाले यदि तपाइँ एक्लै वा एक जोडी को रूप मा बस्नुहुन्छ। किनभने परिवार को सबै प्रकार को एक यस्तो विचार मा प्रतिनिधित्व गरिनेछ।
तपाइँको मनपर्ने श्रृंखला
यदि त्यहाँ एक श्रृंखला छ कि सबै समय को महान मनपर्ने भएको छ 'साथीहरु'। अब उनीहरु सँगै एक पटक फेरि वृत्तचित्र को एक प्रकार मा आउनुभएको छ कि तपाइँ प्लेटफर्महरुमा मजा लिन सक्नुहुन्छ। तर पछाडि दुई अपार्टमेन्ट र friends साथीहरु को ती साहसिक जो हामीलाई अपेक्षा भन्दा धेरै धेरै मुस्कान ल्याएका छन्। एक कमेडी कि समय को पारित को बावजूद एक ठूलो सफलता हासिल गर्न को लागी जारी छ, यसैले, सब भन्दा वर्तमान परिदृश्यहरु मध्ये एक सम्झना जस्तै केहि छैन। जबदेखि हामी सबै क्याफे जान्दछौं जहाँ उनीहरुको आफ्नै सोफा थियो र दिन भर भेटियो। अब तपाइँ 'सेन्ट्रल पर्क' तपाइँ संग घर स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। के यो राम्रो विचार होईन?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » घरका सामानहरू » तपाईंको घरमा मूल ढोकाका स्वागतहरू
अकेलापन को बारे मा5साहित्यिक समाचार